ချက်ခြင်းပြင်ရမယ့် နှုတ်အမူအရာ ၇မျိုး – Gentleman Magazine
ချက်ခြင်းပြင်ရမယ့် နှုတ်အမူအရာ ၇မျိုး
သင့်စကားကို ဘယ်သူမှ နားထောင်မပေးရင် သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အကြံ ဉာဏ်တွေတောင် အလကား ဖြစ်ကုန်မှာပါ။ စကားပြော ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Julian Treasure ဟာ သူ့ရဲ့ ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာ အရမ်းဆိုးတဲ့ နှုတ်အမူအရာ ၇ မျိုးအကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေက သင့်ကို ပရိသတ်မဲ့ ဖြစ်သွားစေနိုင်ပြီး သာမန်လူတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေပါပဲ။
သင့်ကို စကားပြောကောင်းသူ တစ်ယောက် ဖြစ်စေဖို့ အဲဒိ နှုတ်အမူအရာ ၇ မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်အကြောင်း မကောင်းပြောတာက သင့်ကိုလဲ အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ မကောင်းကြောင်း အတင်းပြောရင် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိခိုက်စေပြီး သူများတွေကလဲ သင့်အကြောင်း အဆင်းပြန်ပြောလာကြမှာပါ။
သင့်ရဲ့ စကားဝိုင်းတွေတိုင်းမှာ တခြားသူတွေအကြောင်းချည်းပဲ ပြောနေပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ကောက်ချက်ချ ဆုံးဖြတ်နေရင်တော့ ခုလက်ရှိ သင်နဲ့ စကားပြောနေသူတောင် အဆုံးဖြတ်ခံရမှာ လန့်ပြီး သင့်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စကားမပြောရဲပဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။
အကောင်းမြင်တတ်တာဟာ သင့်ကို စကားဝိုင်းထဲမှာ ပိုဝင်ဆန့်စေပြီး သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပါ ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။
အထွန့်ထက်တာဟာ သင် မသိလိုက်ခင်မှာပဲ အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ မကြာခင်မှာပဲ ရာသီဥတု၊ ပါတ်ဝန်ကျင်၊ သတင်း၊ အလုပ်၊ အရာအားလုံးကို အထွန့်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါက မကောင်းတဲ့ နှုတ်အမူအရာ တစ်ခုပါ။
၅. အလွန်အကျွံ အကြောင်းပြချက် ပေးခြင်း
တချို့သူတွေက ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ကြုံရရင် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီး တခြားသူတွေ အားလုံး၊ တစ်လောကလုံးပေါ်မှာ အပြစ်ပုံချတတ်ကြပါတယ်။ တခြားသူတွေကတော့ မပြောချင်လို့ လွှတ်ပေးထားပေမယ့် သူ့ရဲ့ တာဝန်မယူတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြောင့် နောက်ထပ်အလုပ် တွဲလုပ်ချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပုံကြီးချဲ့ပြောတာဟာ လူတိုင်းလိုလို လုပ်နေကျပါ။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်ထက် အကြီးချဲ့ပြောတာ လိမ်ညာတာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူမှ အလိမ်အညာတွေ နားမထောင်ချင်ပါဘူး။
၇. ကိုယ့်ဘာသာ အလွန်အကျွံ အမှန်ယူခြင်း
အမြင်တွေ အတွေးအခေါ်တွေ ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဘယ်သူကမှ ” တကယ်လို့ မင်းပြောတာသာ မှန်ခဲ့ရင် ” ဆိုတာနဲ့ စတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ကြားချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခကျြခွငျးပွငျရမယျ့ နှုတျအမူအရာ ရမြိုး
သငျ့စကားကို ဘယျသူမှ နားထောငျမပေးရငျ သငျ့ရဲ့ အကောငျးဆုံး အကွံ ဉာဏျတှတေောငျ အလကား ဖွဈကုနျမှာပါ။ စကားပွော ကြှမျးကငျြသူ တဈယောကျဖွဈတဲ့ Julian Treasure ဟာ သူ့ရဲ့ ဟောပွောပှဲတဈခုမှာ အရမျးဆိုးတဲ့ နှုတျအမူအရာ ရ မြိုးအကွောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါတှကေ သငျ့ကို ပရိသတျမဲ့ ဖွဈသှားစနေိုငျပွီး သာမနျလူတှရေဲ့ အမူအကငျြ့တှပေါပဲ။
သငျ့ကို စကားပွောကောငျးသူ တဈယောကျ ဖွဈစဖေို့ အဲဒိ နှုတျအမူအရာ ရ မြိုးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
တဈယောကျယောကျအကွောငျး မကောငျးပွောတာက သငျ့ကိုလဲ အကြိုးသကျရောကျပါတယျ။ မကောငျးကွောငျး အတငျးပွောရငျ သငျ့ရဲ့ ကိုယျကငျြ့တရားကို ထိခိုကျစပွေီး သူမြားတှကေလဲ သငျ့အကွောငျး အဆငျးပွနျပွောလာကွမှာပါ။
သငျ့ရဲ့ စကားဝိုငျးတှတေိုငျးမှာ တခွားသူတှအေကွောငျးခညျြးပဲ ပွောနပွေီး ကိုယျ့ဘာသာ ကောကျခကျြခြ ဆုံးဖွတျနရေငျတော့ ခုလကျရှိ သငျနဲ့ စကားပွောနသေူတောငျ အဆုံးဖွတျခံရမှာ လနျ့ပွီး သငျ့ကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး စကားမပွောရဲပဲ ဖွဈသှားမှာပါ။
အကောငျးမွငျတတျတာဟာ သငျ့ကို စကားဝိုငျးထဲမှာ ပိုဝငျဆနျ့စပွေီး သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကိုပါ ပိုကောငျးလာစပေါတယျ။
အထှနျ့ထကျတာဟာ သငျ မသိလိုကျခငျမှာပဲ အကငျြ့တဈခု ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ သငျဟာ မကွာခငျမှာပဲ ရာသီဥတု၊ ပါတျဝနျကငျြ၊ သတငျး၊ အလုပျ၊ အရာအားလုံးကို အထှနျ့တကျလာပါလိမျ့မယျ။ အဲဒါက မကောငျးတဲ့ နှုတျအမူအရာ တဈခုပါ။
၅. အလှနျအကြှံ အကွောငျးပွခကျြ ပေးခွငျး
တခြို့သူတှကေ ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ကွုံရရငျ သူတို့ကိုယျတိုငျကလှဲပွီး တခွားသူတှေ အားလုံး၊ တဈလောကလုံးပျေါမှာ အပွဈပုံခတြတျကွပါတယျ။ တခွားသူတှကေတော့ မပွောခငျြလို့ လှတျပေးထားပမေယျ့ သူ့ရဲ့ တာဝနျမယူတဲ့ စိတျဓာတျကွောငျ့ နောကျထပျအလုပျ တှဲလုပျခငျြမှာ မဟုတျပါဘူး။
ပုံကွီးခြဲ့ပွောတာဟာ လူတိုငျးလိုလို လုပျနကေပြါ။ ဒါပမေယျ့ ပုံမှနျထကျ အကွီးခြဲ့ပွောတာ လိမျညာတာဖွဈပွီး ဘယျသူမှ အလိမျအညာတှေ နားမထောငျခငျြပါဘူး။
၇. ကိုယျ့ဘာသာ အလှနျအကြှံ အမှနျယူခွငျး
အမွငျတှေ အတှေးအချေါတှေ ရှုပျထှေးလာတဲ့ အခါမြိုးမှာ ဘယျသူကမှ ” တကယျလို့ မငျးပွောတာသာ မှနျခဲ့ရငျ ” ဆိုတာနဲ့ စတဲ့ အတှေးအချေါတှကေို ကွားခငျြမှာ မဟုတျပါဘူး။
Previous: စကားနည်းသူတွေအတွက် ပြောဆိုဆက်ဆံမှု နည်းလမ်းများ